Burmese taste - Iora: ငါးပိရည်ချက်၊ တမာဖူးတုို့ ၊ ငါးမွှေချက် နဲ့ မြန်မာဗားရှင်း thanksgiving ပါတီ
Posted by Iora at 10:48 PM
မြတ်ကြည် November 27, 2011 at 11:22 PM
ဟင်းတွေက အများကြီးပဲနော်။ အရင်ဆုံးလာစားသွားတယ်။ တို့ဟူးတွေ ဘာလုပ်လိုက်လဲ အစ်မ?
Vista November 27, 2011 at 11:35 PM
ဟောဒီက ပရိတ်သတ်ကလည်း စားချင်တယ်
Nyi Linn Thit November 27, 2011 at 11:42 PM
တကယ့်ကို အစုံပါပဲလား..၊ မြန်မာဗားရှင်း Thanksgiving ကိုလည်း သဘောကျ သွားတယ်..။ ထုံးစံအတိုင်း သွားရည်ယိုစရာ ပဲပေါ့..။း)
Kyaw Hnin Se Lwin November 27, 2011 at 11:47 PM
ထိုင်းကငပိရည်ဘူးကိုအဲလိုငပိရည်ကျိုချက်လေးချက်တာခုမှသိတယ်မရယ် စားချင်စရာကောင်းလိုက်တာ လုပ်စားဦးမယ်
ညယံ November 27, 2011 at 11:47 PM
စပါးလင် ၊ ငံပြာရည် ပြုတ်ပြီးမှ ပြန်ချက်တာ အနံလေးလည်း မွှေးတယ် ။ စားလို့ လည်းကောင်း အထားလည်း ခံတယ်နော်...
ဘိတ်ထားတာလေး စားချင်တယ် ။ တို့ ဟူးကြိုထားတာလည်း လှမလှ ။ ပြောင်ချောချောလေးနဲ့ ။ သုတ်စားလိုက်ရလို့ ကတော့ တဗန်းလုံးကုန်မှာဘဲ ။ စိတ်ကြီးဒယ် :D
စန္ဒကူး November 27, 2011 at 11:52 PM
အဲလို thanksgiving မျိုးဆိုရင် ဘယ်နှပွဲလာလာပါ.. တစ်ကယ် မငြီးတမ်း ကိုစားမှာ.. အခုတော့ ကြက် ဆင်တွေနဲ့ အရသာမဲ့ ပွဲတွေတိုးနေလို့ သိပ်ကို ညစ်ရ.. ငြင်းလို့လဲမကောင်းး ...
I want to be your neighbour.You really love to cook,i think.I agree with your CC (let kyee tel).This blog'll be my reference for cooking:P
Baby taster November 28, 2011 at 2:44 AM
အိမ်မှာ တခါမှ thanksgiving မလုပ်ဖူးး)
ကျေးဇူးရှင်မွေးစား အမေဆီ မသွားမနေရလေး)
နှစ်တိုင်း အဲ့ဒီမှာပဲ လုပ်ဖြစ်တယ်။ နေ့ရော ညပါ အပြင်မှာ ဆက်နေပေမယ့်
ကိုယ်တော့ ဘာမှ မစားလိုက်ရပါဘူးး( အစာအိမ် ပြန်ရောင်နေလို့လေး(
Aunty Oo November 28, 2011 at 2:53 AM
subuueain November 28, 2011 at 3:19 AM
စုံနေတာဘဲ ။ ငါးပိရည်နဲ့ တို့စရာကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 28, 2011 at 7:36 AM
ဒီလိုသာစားလိုက်ရလို့ကတော့ ထိုင်ရာကထနိုင်ဖို့ မလွယ်..
ငါးနှိုင်းချင်းနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ငပိရည်လေး မျက်စိထဲကကို မထွက်ပါဘူးကွယ်..။ ငါးပတ်မွှေလည်း တူတူပေါ့။
ကြက်ဆင်ကြီးကတော့ နီးနီးနားနားသာဆိုလို့ကတော့ မိုက်ကြေးခွဲချင်စရာရယ်..
သူများကျတော့ ခေါ်မဲ့သူလည်း မရှိဘူးး(
Iora November 28, 2011 at 8:20 AM
ပဲပြုတ်ကြော်အထိက မနက်ဘက်မှာစားထားတာပါ။ တာကီ နဲ့ အပေါင်းပါတွေကမှ ညဘက်ပါတီမှာစားတာပါ။ တုိုဟူးကိုနောက်နေ့ ကျတော့ သုပ်စားတယ်။ ကုိုယ်က မြန်မာသုပ်ရှောက်ရွက်လေးနဲ့ ၊ သူငယ်ချင်းက ရှမ်းသုပ်၊ နောက်ရက်ကျတော့ ကြော်စားတယ်။ ကျန်နေသေးတယ်။း)
စုံဆုိုမနက်ညပေါင်းသွားတာကိုး။ ကုိုယ်ရေးထားတာကလည်း မရှင်းမရှင်းနဲ့ ။
မြန်မာဗားရှင်းကို သဘောကျသွားတယ်ဆုိုတော့အရင်နှစ်တွေကဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်ဆိုပြီး ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ပုံတွေရှိရင် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေတင်လိုက်အုန်းမယ်။ (လာပြန်ပြီ..နောက်တမျိုး)
လုပ်စားလုပ်စား။ အရမ်းမြန်တယ်သိလား။ ကျိုစရာမှမလိုတာကိုး။ လာလည်လို့ ဒို့ ကကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
ကျန်သေးတယ်။ ကျန်သေးတယ်။ ရွှေကြည်တွေရော တုိုဟူးတွေရော။ သူငယ်ချင်းကလည်း အဲဒါတောင် သူ့ တုိုဟူးကိုစိတ်တိုင်းမကျဘူး။ ရှမ်းတွေဟာ တော်တော်အကောင်းသိကြပါလားနော်။း)
စိတ်ကြီးရင် အပြတ်အားပေးသွားပေတော့။း)
ဟုတ်ပါ့၊ ဘိုပွဲမှာ တာကီရယ်ဖရုံသီးရယ် ကန်စွန်းဥတွေရယ် နဲ့ ဘုိုတေ့စ်လေနော်။ ဒါပေမဲ့ရုိုးရာလေးကတော့ချစ်စရာပါ။ ကိုယ်ကတော့ တောကျတယ်ဆုိုဆို ငါးပိတုို့ ငရုတ်သီးတို့ ပါမှ အစားအစာလို့ ထင်တယ်။
You are most welcome. I am honored that my blog will be your ref:. Then my cc will be very happy if you agree with him. :)
တကယ်တော့မလုပ်တာကောင်းတယ် ပြောရမလား။ လုပ်ရင်တော့ တာကီကို တကယ်ဖြိုနုိုင်မဲ့အုပ်စုလိုမယ်။ ဟင်း..ဟင်း
အစာအိမ်နာနေသလားလို့ တွေးနေတာ နေမကောင်းလို့ အားနေတယ်ဆိုတာဖတ်ရကတည်းက။ ဂရုစိုက်ပါနော်။ မဟာဖြေဆေးနဲ့ လည်းသက်သာပုံမရဘူး။ ကိုယ်တော့ သရုိုးသရီဖြစ်တာနဲ့ မဟာဖြေဆေးကြီး ကိုမှန်မှန်သောက်လိုက်ရင် ပျောက်သွားတယ်။ လေစာတွေလည်း ရှောင်ပေါ့နော်။ အမြန်သက်သာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်။
မနက်စာ ညစာပေါင်းထဲ့ထားလို့ ပါရှင်။ မနက်စာ ကအဲဒီဟင်းတွေနဲ့ ထမင်းစားထားတာပါ။ ဟင်းက အရင်နေ့ ကချက်ထားတာပါ။ တာကီနဲ့ အပေါင်းပါများလုပ်ပြီး နောက်နေ့ ကျတော့ အရမ်းညောင်းတာပါဘဲ။ အများဆုံးလုပ်သွားတာက သူငယ်ချင်းပါ။
ကိုယ်လည်း တို့ စရာနဲ့ ငါးပိချက်ကို ပိုကြိုက်တယ်။
ဒီကသူများကိုလည်း ဖိတ်မဲ့သူမရှိလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖိတ်ပြီးလုပ်လိုက်တာပါ အားမငယ်ပါနဲ့ ကွယ်။း) နောက်နှစ်ကျဖိတ်မယ်နော် လေယာဉ်ဘုိုးတော့ မတတ်နုိုင်ဘူးနော်။ (အန်တီတင့်စီကတောင်း)
san htun November 28, 2011 at 3:01 PM
တံတွေးမမျိုချပါနဲ့ ...စိတ်ကြိုက်စားသွားပါ။ အလျှံပယ်ဘဲနော်။
ဆောရီး..စန်းထွန်းရေ..၀တ်စပေါက်ကျန်ပြီး တချောင်းငင်နဲ့ ဟထုိုးရှေ့ မှာပေါ်နေလို့ ။း)))))))
T T Sweet November 29, 2011 at 9:05 PM
အိမ်မှာလဲ ငပိရည်ကျိုချက်တာမျိုး ချက်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိုင်အိုရာချက်ထားတာလေးက စားချင်စဖွယ်ပိုကောင်း သလိုပဲ။ အားလုံးစားချင်ဖွယ်ရာတွေချည်းပဲ တင်ထားပါလား။ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး တစ်ခုခုထ စားမှဖြစ်မယ်။
KO2 November 30, 2011 at 8:22 AM
အောင်မယ်လေးဗျာ ..ဗိုက်ဆာနေပါတယ်ဆို ဒီဘလော့ ရောက်လာမှ ကလီစာတွေ ဘောင်ဘင်ခတ်ကုန်ပါပြီ။
ကောင်းမွန်ဝင်း November 30, 2011 at 9:47 AM
အဲဒါနဲ့ အိမ်နောက်ဖေးသွားပြီး မြန်မာရေနွေးကြမ်းလေးထည့်တယ်။
ပြီးတော့ ပြန်လာအဲဒါလေးကြည့် ရေနွေးမှုတ်သောက်ပေါ့။
တမာဖူးတွေတရုပ်ဆုိုင်ကတထုတ်ဝယ်ထားတာ သူကမစားတော့ ကို်ယ်တယောက်ထဲစားနေတာ မကုန်ကိုမကုန်နုိုင်ဘူးကောင်းရေ။
အိမ်ချင်းနီးရင်ကောင်းမှာဘဲနော်။ တူတူရေနွေးကြမ်းလေးသောက်ပြီး စားရင်းစကားပြောလို့ ရတာပေါ့နော။
jasmine(တောင်ကြီး) December 1, 2011 at 12:06 AM
Iora December 1, 2011 at 2:55 PM
မပူနဲ့ မပူနဲ့အများကြီးမှ အများကြီးရယ်။ ခုထိကုိုရှိသေးတယ်။ မလောက်ရင် အကုန်ထပ်လုပ်ပေးလို့ ရသေးတယ်။
လာအားပေးလုို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။း)
mu yar March 23, 2012 at 8:13 AM
US မှာနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်မြို့မှာလဲ။ အမက New York မှာပါ။ ဟုတ်တယ် ယိုးဒယားဆိုင်မှာ ငပိရတယ်နော်။ အမကတော့ ကြက်သွန်နီ ဖြူကြော်ကို အဲဒီကဘဲဝယ်တယ်။ အိမ်မှာကြော်ရင်လည်း အနံရှိတယ်လေနော့်။ ညီမရေ တမာဖူးလေးဘယ်က၀ယ်တာလဲ စားချင်လိုက်တာ။ ညီမလေးတို့ blog တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေကို လုပ်လုပ်စားရတယ်။ မိတ်ဆွေလည်းတိုးတာပေါ့နော်။ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ နောက်ညီမရဲ့ ငါးပိကောင်ကြော်လေ။ အမက အဲဒီငါးကို ဒီတိုင်းအကျွတ်ကြော်စားတယ် ကောင်းတယ်နော်။
mu yar March 30, 2012 at 6:42 AM
Iora April 8, 2012 at 12:49 AM
ဖရုိုးဇန်းအသီးအရွက်တွေထားတဲ့နေရာမှာတွေ့ တာပါ။ ဒညင်းသီးတုို့ ဆူးပုတ်တုို့ ထုိုင်းငရုတ်သီးအနီတို့ ထားတဲ့နားလေးကတွေ့ တာပါ။
အဲဒီငါးကိုဒီတုိုင်းတော့မစားဖူးဘူးမမူရာ။ ကောင်းတယ်ဆုိုရင်နောက်တစ်ခါကြော်စားအုန်းမှဘဲ။ အားတဲ့အခါလာလည်ဘို့ ဖိတ်ပါတယ်ရှင်။ မှတ်ချက်လေးပေးသွားလို့ လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
mu yar April 9, 2012 at 1:06 PM
ဟားဟား- အမတမာဖူးကို ကယ်လီဖိုးနီးယားကို သွားဝယ်ရမယ် ညီမရေ (စတာနော်)
အမဒီက ယိုးဒယားဆိုင်ကိုရောက်ရင် ရှာကြည့်အုံးမယ်။ တရုတ်ဆိုင်မှာတော့ မတွေ့မိဘူး ဒါပေမယ့်နောက်တရုတ်ဆိုင်တွေ ဈေးသွားဝယ်ရင် သတိထားရှာကြည့်အုံးမယ်နော်။
လာလည်တယ်ညီမလေးရေ- ညီမလေးထဲက စားစရာလေးတွေက သွားရည်ကျရတယ်လေ :)